Home / रोचक / बुद्धको पाईलाको फोटो जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! हजुरहरु सबैलाई शुभदिनको शुभकामना मात्र ॐ लेख्नुहोस!अनी शेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ!
बुद्धको पाईलाको फोटो जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! हजुरहरु सबैलाई शुभदिनको शुभकामना मात्र ॐ लेख्नुहोस!अनी शेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ! 0
म्याच फिक्सिङमा परेका सागर थापा यस्तो हरिबिजोग अवस्थामा ,भन्छन बजारको बीचमा लगेर नाङ्गै पारेर उभ्याएको जस्तो लाग्छ(भिडियो सहित)
नुहाएपछि हात खुट्टाको छाला किन चाउरी पर्छ ? यस्तो छ कारण